‘म सँग बैंक लुत्ने मास्तर प्लान छ’ – जब पनि आफ्नो लुटेरा समूह बनाउनको लागि हाकु काले ले नयाँ केटाहरु भेट्छ, उ यही संवाद दोहोर्याउँछ ! नेवारी लवजमा हाकुले यस्तै अन्य संवादहरु दोहोर्याउँदा हलमा हासोँ फैलिन्छ !
निश्चल बस्नेत निर्देशित नेपाली चलचित्र ‘लुट’ (Loot – A Nepali Movie) अहिले देशभरिका विभिन्न सहरहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ! “लुट”को कथा नौलो होइन ! कथा साधारणछ, हाकु काले नामक व्यक्तिले चाँडै धनि बन्ने सपना बुन्छ, र बैंक लुट्नको लागि अन्य सहयोगीहरु खोज्छ र एउटा लुटेरा समूह बनाउँछ ! आफ्नो योजनाअनुसार उसले ती चार पात्रहरुलाई बैंक लुट्न तयार पार्छ र बैंक लुट्न कसरी सफल हुन्छ भन्ने कुरा नै चलचित्र लुटको मुख्य कथासार हो । यही “बैंक लुट्ने” कथामा हलिउड र बलिउडमा दर्जनौँ चलचित्रहरु बनिसकेकाछन् तर पनि “लुट” ले आफ्नो छुट्टै छाप छोड्न सफल भएकोछ ! कथालाई मौलिक बनाइदिएकोछ !
कथा सामान्य भएपनि, चलचित्रको प्रस्तुतीका कारण चलचित्रले दर्शकहरुलाई सुरु देखि अन्त्य सम्म बाँधेर राख्न सफल भएकोछ ! चलचित्रमा हाकु (सौगात मल्ल), पेशाले भट्टि साहु हुन्छ, जो चाँडै पैसा कमाउनको लागि बैंक लुट्ने योजना बनाउँछ ! नेवारी लवजमा नेपाली बोल्ने, हाकु चलचित्रमा मज्जाले जमेकाछन् ! नरे बनेका कर्मा, पेशाले बाउन्सर हुन्छ र छिटो पैसा कमाउनकै लागि हाकुको बैंक लुट्ने योजनामा सामेल हुन्छ ! खत्री बनेका प्रतिक, ठमेलमा ड्रग र हतियार सप्लाइ गर्ने व्यक्ति हुन्छ ! बैंक योजनामा हाकुले, खत्रीलाई पनि सामेल गर्छ ! चलचित्रमा कहिँकहिँ खत्रीको अभिनयमा खोट लगाउने ठाउँ भेटिन्छ । गोपाल र पाण्डेको रोलमा क्रमश दयाहाङ राई र सुशिल छन् ! गोपाल वा “गोफ्ले” को रुपमा दयाहाङ जमेका छन्, उनका प्रत्येक संवाद रमाइला लाग्छन् ! उनको अभिनयमा कुनै खोट लगाउने ठाउँ छैन, सुशिल पनि आफ्नो रोलमा ठिकैछन् तर पनि उनले सुधार गर्नुपर्ने अझै ठाउँ भने छ ! पाण्डेको “गलफ्रेन्ड” को रुपमा “आयसा” अर्थात ऋचा शर्मा रहेकी छिन् ! ऋचाको अभिनय आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ ! डान्सबारको एउटा गित “उध्रेको चोली”मा एकछिन सुस्मिता कार्की देखा पर्छिन् !
चलचित्र अभिनय, छायांकन, कथानक, निर्देशन सबै हिसाबले राम्रो छ ! साँच्चै भन्ने हो भने, मैले ती कुराहरुमा खोट लगाउने ठाउँ देखेको छैन ! रमाइला संवादहरुमा “समाजमा अपाच्य शब्द” राखिएको भनेर केहीले गुनासो गरेकाछन् तर मलाई लाग्छ संवादले हाम्रो आफ्नो वास्तविक धरातल देखाइदिएकोछ, यसअर्थमा संवाद कुनै पनि हिसावले वनावटि लाग्दैन ! चलचित्रमा अन्यकेही गितहरु विचविचमा व्याकग्राउन्डमा राखिएको भएपनि, “उध्रेको चोली” बाहेक अरुकुनै गित अहिले आफूलाई याद छैन !
नेपाली चलचित्रहरु विच प्रदर्शनको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको कारण, यो चलचित्रले यति नै व्यापार गर्ला, यति नै चल्ला त भन्न सकिन्न तर पनि समग्रमा भन्दा चलचित्र धेरै राम्रो बनेको छ ! चलचित्र भवनमा हिजो हामी चलचित्र हेर्न पुग्दा, हल खचाखच भरिएको थियो!
चलचित्र हेरिसकेपछि लाग्यो, यस्तो चलचित्र पनि नेपालीले बनाउन सक्दारै'छन् ! नेपाली चलचित्रमा नयाँपन केही छैन, नेपाली चलचित्र राम्रा हुँदैनन् भन्दै नेपाली चलचित्र हेर्नुभएको छैन भने पनि, “लुट” चाँहि एकपल्ट हेर्नै पर्छ भनेर सुझाउँछु !
Trailer of Nepali Film Loot
Loot–Nepali Movie Trailer
सोसल मिडियामा लुट
मैले हिजोपनि ट्विट गरेको थिँए, सायद यो नै पहिलो नेपाली चलचित्रहोला, जसको सोसलमिडियामा यतिधेरै कुराकानी भएकोछ ! ट्विटर, फेसबुक र ब्लगमा यही चलचित्र लुटको चर्चा भइरहेकोछ! हामीले फेसबुक र ट्विटरमा भएका कुराकानीहरु यहाँ समेट्ने प्रयास गरेका छौँ !
Movie: Loot (Nepali Movie)
Producer: Madhab Wagle, Narendra Maharjan
Starring: Saugat Malla, Karma, Dayahang Rai, Prateek Raj Neupane, Sushil Raj Pandey, Reecha Sharma, Srijana Subba, Sushma Karki
Rating: 4.5/5 (AakarPost’s Rating)
(हामीले फेसबुकको लिमिडेट पोष्ट पनि यहाँ नसोधिकनै प्रकाशन गरेकाछौँ, कसैलाई आपत्ति छ भने, खबर गर्नुहोला!)
Cross Post on Aakar Tech: Loot Gets Social Media Love #Loot #NepaliMovie #Nepal #SocialMedia
Ekendra August 1, 2012 at 12:03 PM
"नेपाली चलचित्रमा नयाँपन केही छैन, नेपाली चलचित्र राम्रा हुँदैनन्"
"यो चलचित्रले यति नै व्यापार गर्ला, यति नै चल्ला त भन्न सकिन्न"
जे होस् अब हामी संग राम्रा नेपाली चलचित्रको कमि छैन भन्न सकिने भयऊ - राम्रो एसअर्थमा कि प्रविधि अनि प्रस्तुती दुवै मा राम्रो हुदै छ!
Raju Tamang August 1, 2012 at 12:03 PM
Nepali film na herya pani dherai bhayo nearly abt6yrs yo chae hernu parla jasto cha....
Bhuwan Raut August 1, 2012 at 12:03 PM
पासाले पनि दिमाग लार ब्लग लेखेछन .... जे होस् समग्रमा फ्लिम धेरै नै राम्रो बनेको छ .... धेरै पछी फ्लिम हलमा नेपाली फ्लिम हेर्न जानु हुदै छ भने निरास हुनु पर्ने छैन :)
Puzatamrakar August 1, 2012 at 12:03 PM
i'm dying on saugat malla's acting...... awesome..